साह्रै दुखद खबर : बुवाको मृ’त्युको केहि समय नहुँदै २ भाई छोराको भयो मृ’त्यु ! – AB Sansar
November 8, 2020 adminLeaveaComment on साह्रै दुखद खबर : बुवाको मृ’त्युको केहि समय नहुँदै २ भाई छोराको भयो मृ’त्यु !
कोरोनाभा इ रस स ङ्क्रमणका कारण एकै परिवारका सदस्यहरूको मृ त्यु हुने क्रम बढिरहँदा सोही पी डामा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं २ मा रहेको भट्टराई परिवार पनि परेको छ। भट्टराई परिवारमा यति ठूलो व ज्र पा त पर्ला भन्ने कसैको कल्पनामा थिएन। तर विश्वव्यापी म हामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभा इरसको सङ्क्रमणले भट्टराई परिवारका दुई छोरालाई परिवारबाट चुँडेर लग्यो। अहिले उक्त परिवार शो का कु ल छ। केही दिन अघि झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं २ का ३७ वर्षीय दयाराम भट्टराईलाई कोरोनाभा इरस स ङ्क्र मण पुष्टि भयो। स ङ्क्र मित भट्टराईको गत कात्तिक १४ गते विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा मृ त्यु भयो। ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
त्यसको ठिक चार महिनाअघि कोभिड-१९ कै कारण सोही घरका कान्छा छोरा योगेश्वरको कतारमा मृ त्यु भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। साउदी अरबमा रहेका विष्णुप्रसादका भाइ योगेश्वर बुवाको का ज कि रिया गर्न गत साल नेपाल आएका थिए। काजकिरिया सकेर उनी अर्को रोजगारीको गन्तव्य मुलुक कतार फर्के। तर बुवाको वार्षिकीको अघिल्लो दिन योगेश्वरको कोरोनाभा इ रस स ङ्क्र मणका कारण मृ त्यु भएको खबर परिवारले सुन्नु पर्‍यो।
योगेश्वरका दाजु विष्णुप्रसाद भन्छन्, “बुवा बितेको वर्ष दिन पुग्ने अघिल्लो दिन भाइ नरहेको खबर सुनेपछि व ज्र पा त भयो।” तीस वर्षीय योगेश्वर कतारको एउटा होटलमा नगद सङ्कलनमा काम गर्थे। कामकै सिलसिलामा उनलाई कोरोनाभा इरस स ङ्क्र मण भएको परिवारका सदस्यले आ श ङ्का गरेका छन्।****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
साइकलमा गैरहेका बाबुछोरिलाइ टिप्परले ठ’क्क’र दिदा छोरिको मृ’त्यु, बुबा ग’म्भी’र घा’इ’ते
कोरोना भाइरसका कारण एकदिनको अन्तरालमा दाजुभाइको मृ’त्यु